Faah Faahin: Dagaal labo maalin ka socday Gobolka Bakool | idalenews.com
Home Idale Somali News Update Faah Faahin: Dagaal labo maalin ka socday Gobolka Bakool
Faah Faahin: Dagaal labo maalin ka socday Gobolka Bakool
Xudur ( INO)-Deegaanka Mooro Gaabeey waxa uu 45 km dhanka Galbeed kaga beegan yahay Degmada Xudur ee Gobolka Bakool waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacay Dagaal Khasaaro geystay oo u dhexeeyay Xarakada Al Shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo garab ka helaya kuwa AMISOM.
Maxamed Macallin oo Guddoomiyaha Degmada Xudur ayaa Warbaahinta uga warbixiyay Dagaaladaasi isagoona xusay in Dagaalka labadii Maalin ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Mooro Gaabeey uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahaan ka dhaca Gobolka Bakool.
Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa intaas ku daray in 8 Askari oo ka tirsan Ciidamada dowadda ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi halka 9 kale la sheegay inay ka dhinteen Xarakada Al Shabaab kuwaas oo Guddoomiyuhu sheegay in uu ka mid ahaa Sarkaal sare oo ka tirsanaa Al Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Waxaana uu Guddoomiyuhu shaaca ka qaaday in Asartaasi dhaawacantay lagu daabulay Diyaarad loona qaaday Magaalada Muqdisho si loogu dabiibo.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Xudur ayaa sheegay in Ciidamada dowladda Gobolka Bakool ay yihiin Saanad la’aan isagoo ku eedeeyay maamulka Koofur Galbeed iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay dayaceen Ciidamadaasi sida uu hadalka u dhigay.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa xiisado dagaal laga soo sheegayay in ay ka oogan yihiin qeybo ka mid ah Gobolka Bakool.
Previous articleAMISOM oo sheegay in ay fashilinayaan weeraro Al Shabaab ay la damacsan yihiin Goobaha Doorashooyinka
Next articleAMISOM oo ka warbixisay Shil Gaari ay leeyihiin uu dad shacab ah ku waxyeeleeyay